काठमाडौंको लैनचौरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
काठमाडौँ । काठमाडौँको लैनचौरमा आज बिहान भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबच्चा छन् ? पायक पर्ने बुथमा लैजाने कि ?
काठमाडौँ । शिशु जन्मेको ६ महिना पुग्यो ? अथवा पाँच वर्षमुनिको छ ? छ भने भोलि पायक पर्ने ‘बुथ’मा लिएर जाने तयारी गर्नुहोला ।
गाैतमबुद्ध विमानस्थल ६ महिनाभित्रै सञ्चालनमा : मन्त्री अधिकारी
बुटवल । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ६ महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने दाबी गरेका छन् ।
छुवाछूत भएको मुद्दा दर्ता भएन
सर्लाही । घटना यही साउन २७ गतेको हो । विष्णु गाउँपालिका–२ का अजयराम आफ्नो चार वर्षीय छोराको पोषणभत्ता बुझ्न वडा कार्यालय गएका थिए ।
कतार । कतारको चार दिने औपचारिक भ्रमणको दोस्रो दिन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कतारका अमिर शेख तमिम बीन हमाद अल थानी बीच भेटवार्ता हुँदैछ ।
सिँचाइ गर्ने पानी लैजाने विषयमा कुटपिट हुँदा एक वृद्धको मृत्यु
तोरीमा सिँचाइ गर्ने पानी लैजाने विषयमा विवादपछि कुटपिट हुँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ गोलौराका ७३ वर्षीय सुकलाल भण्डारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा सुधार, बिहान सजिलैसँग खाजा खाए
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । उनको उपचारमा संलग्न प्रा डा. अरुण सायमीले प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहान सजिलैसँग खाजा खानुभएको र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार रहेको जानकारी दिए ।